USAID Mikolo : nihatsara ny fahasalaman’ny mponina | NewsMada
USAID Mikolo : nihatsara ny fahasalaman’ny mponina
Niakatra ho 115.148 ny isan’ny vehivavy miteraka isan-taona any ny tobim-pahasalamana tamin’ny 2017, raha 50.192 izany tamin’ny 2015. Nambaran’Atoa John Yanulis, talen’ny tetikasa USAID Mikolo, fa “mankasitraka ny anjara andraikitra raisin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka eo amin’ny sehatry ny fahasalamana eny itofony izahay mandritra izay dimy taona lasa izay. Matanjaka ny rafitry ny fahasalamana eto amin’ny firenena ary manome fitsaboana maro karazana sy tsara, indrindra fa ho an’ny mponina any ambanivohitra.”
Nitondra fomba fiasa sy fitaovana vaovao ny USAID Mikolo, niarahany miombona antoka amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka izany. Teo ny fampiasana finday ho an’ny asam-pahasalamana izay manatsara ny kalitaon’ny asa sy ny tatitra ataon’ny mpanentana fahasalamana. Fanaraha-maso ataon’ny samy mpanentana hanatsarana ny kalitaon’ny fitsaboana, hiatrehana ny tsy fahampian’ny mpiasa sy hampirisihana ny mpanentana hanao ny asany antsakany sy andavany. Rafitra fitantanana ifotony ny entana sy ny fanafody. Fanaraha-maso ny valanaretina amin’ny fampiasana ny antontanisa eny ifotony hanafainganana ny ady atao amin’ny valanaretina tazomoka. Fampidirana ireo vondrona fampindramam-bola sy findramam-bola hanatsarana ny fahazoana mindram-bola sy hanomezana fahaleovantena toekarena ny vondrom-piarahamonina.
Noho ny fiaraha-miasa akaiky amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, nahomby ny famindrana ny tetikasa sy ny fitaovana eo anivon’ny fanjakana malagasy sy ny mpiara-miombon’antoka aminy. Nohamafisina ny sehatry ny fahasalamana eny ifotony ka nahatonga azy ho andry iankinan’ny rafitry ny fahasalamam-bahoaka izay manome ny fitsaboana ilain’ny vahoaka malagasy tena marefo sy manao izay ahafahan’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka manome fahafaham-po ny filan’ny mponina any amin’ny faritra lavi-toerana.